नदी प्रवाह आधारित आयोजनाको कोटा बढ्यो, अब पीपीए खुल्ने बुधबार, असार १५, २०७९
नाबालिग बलात्कारको घटनामा दोलखा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश न्यौपानेको मिल्न सुझाव शुक्रबार, असार १०, २०७९
निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने आयोगको चेतावनी बुधबार, असार ८, २०७९
जग्गा धितोमा रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश सोमबार, असार ६, २०७९
ईन्धनको मूल्य बढेसँगै यातायातको भाडामा पनि उच्च बृद्धि (सूचीसहित) सोमबार, असार ६, २०७९
सरकारले ईन्धनको मूल्य फेरी बढायो, पेट्रोल १९९, डिजेल/मट्टितेलको मुल्य १९२ पुग्यो सोमबार, असार ६, २०७९
अखिल क्रान्तिकारीको बैठकमा कुटाकुट काठमाडौं - नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको बैठकमा हंगामा मच्चीएको छ । तीनकुनेस्थित रोयल व्यांक्वेटमा बसेको तेस्रो केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नुअघि हात हालाहालको अवस्था सिर्जना भएको हो । पदाधिकारी चयनमा असन्तुष्ट विद्यार्थी नेता पवन कार्कीको समूहले हलमा नाराबाजी गरेपछि तनाव सुरु भएको थियो । त्यसपछि हातहालाल नै भएको प्रत्यक्षदर्शी नेताहरुले बताएका छन् । विवादले उग्र रूप लिएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले बल प्रयोग गरेर बैठक स्थल खाली गराएको थियो। आइतबार, असार ५, २०७९
एमाले जनप्रतिनिधिको २० बुँदे संकल्प : हामी शासक होइन, जनताका सेवक हुन्छौैं काठमाडौँ - नेकपा एमालेका निर्वाचित स्थानीय तह प्रमुख र उप प्रमुखहरुको भेलाले शासक नभई सेवक बन्नेु घोषणा गरेको छ । २० बुँदे संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै भेलाले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । एमालेका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको दुई दिनसम्म काठमाण्डौंमा चलेको प्रशिक्षण कार्यक्रमपछि संकल्प जारी गरिएको हो । संकल्प प्रस्तावमा एमालेका जनप्रतिनिधिले पालना गर्ने आचरणदेखि कामका प्राथिमकता पनि उल्लेख छन् । शुक्रबार, असार ३, २०७९
भारतले उच्च मुल्यबृद्धिसहित ईन्धनको नयाँ मूल्य सूची पठायो काठमाडौँ - भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले ईन्धनको मुल्य बढाएर नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ । उच्च मुल्यबृद्धिसहित आईओसीले बिहिबार पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको नयाँ मुल्यसूची पठाएको हो । बिहीबार, असार २, २०७९
विवाह गर्ने उमेरहद घटाउने सरकारको तयारी काठमाण्डौं - सरकारले विवाह गर्ने उमेरहद संशोधन गर्ने भएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द कोइराला (बन्दी) ले बुधबारको संसद बैठकमा विवाह गर्ने उमेर संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए । बुधबार, असार १, २०७९
विश्वकप फुटबलमा ३२ देश खेल्ने, यस्तो छ समुह विभाजन ! काठमाडौं - सामान्यतया गर्मी मौसममा फिफा विश्वकप फुटबल आयोजना हुने गर्छ । यति बेला विश्वकप फुटबलको माहोल तात्नुपर्ने थियो । तर यस पटक आयोजक रहेको कतारमा गर्मी धेरै हुने भएकाले विश्वकप जाडो महिनामा सारियो । बुधबार, असार १, २०७९
आगामी निर्वाचनका लागि देशभर मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक सुरु काठमाण्डौं - निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली संकलन कार्य आजबाट सुरु गर्दै छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले ७७ वटै जिल्लामा आजबाट मतदाता नामावली संकलन कार्य सुरु हुने जानकारी दिए । बुधबार, असार १, २०७९
एसईईको नतिजा असार मसान्तभित्र, उत्तरपुस्तिकाको जाँच प्रदेश स्तरमा हुने काठमाण्डौं - यस वर्ष सञ्चालित माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा असार मसान्तभित्र प्रकाशन गर्ने तयारी भैरहेको छ । राष्टिय परीक्षा बोर्डका अनुसार नतिजा असार मसान्तसम्म निकाल्ने गरी काम भईरहेको छ । यसैबीच एसइईको उत्तरपुस्तिका अब प्रदेश स्तरमा जाँच हुने भएको छ । मंगलबार, जेठ ३१, २०७९
एमसीसीपछि अमेरिकाको एसपीपी सम्झौता प्रस्ताव (१० बुँदे प्रस्तावसहित) काठमाण्डौं - नेपाल सरकार र अमेरिकाको उटाह राज्यको राष्ट्रिय पहरेदार (नेशनल गार्ड) बीच राज्यस्तरीय सहकार्य कार्यक्रम (एसपीपी) गर्नको लागि अमेरिकाले १० बुँदे प्रस्ताव गरेको छ । एसपीपी कार्यक्रमलाई लिएर सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले प्रश्न र विरोध गरिरहँदा अमेरिकी पक्षबाट नेपाललाई प्रस्ताव गरिएको दस्तावेज सार्वजनिक भएको हो । मंगलबार, जेठ ३१, २०७९
सबै उपाय लगाएर किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई प्रतिनिधिसभाको निर्देशन काठमाडौँ - प्रतिनिधिसभाले किसानका लागि मल उपलब्ध गराउनका लागि सम्भव सबै उपाय अपनाउन र अविलम्ब मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकले सर्वसम्मतिले सरकारलाई मल उपलब्ध गराउने सबै उपाय अपनाउन निर्देशन दिएको हो । सोमबार, जेठ ३०, २०७९
चिनीको मूल्य प्रतिकिलो २० रुपैयाँले महँगियो काठमाण्डौं - दैनिक उपभोग्य बस्तुको मुख्य बढ्ने क्रम रोकिएको छैन । खुद्रा बजारमा चिनीको मूल्य किलोमै २० रुपैयाँले महँगिएको छ । बजार मूल्य हस्तक्षेप गर्ने सरकारी निकाय मौन बस्नु र चिनी उत्पादकले चिनी लुकाएका कारण बजारमा चिनीको अभाव देखिएको हो । आइतबार, जेठ २९, २०७९
डलरको भाउले कायम गर्यो नयाँ रेकर्ड काठमाडौँ - नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलरको भाउ (विनिमय दर) लगातार बढेर हरेक दिन नयाँ रेकर्ड बनाउन थालेको छ । सोही क्रममा एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर १ सय २४.८४ रुपैयाँ पुगेको छ । यो हालसम्मकै बलियो र बलियो हो । शनिबार, जेठ २८, २०७९
युक्रेनी बन्दरगाह सहर मारिओपोलमा हैजा प्रकोपको जोखिम काठमाण्डौं - युक्रेनी बन्दरगाह सहर मारिओपोलमा हैजा प्रकोपको जोखिम देखिएको छ । रुसी सेनाको आक्रमणबाट ध्वस्त बनेको मारिओपोल गएको मे महिनामा रुसले कब्जा गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अनुसार यो सहरमा धेरैजसो पूर्वाधार क्षतिग्रस्त भएका छन् भने पानीमा ढल मिसिएको छ । शनिबार, जेठ २८, २०७९
महंगी आकासिएर दश प्रतिशत नजिक, काठमाण्डौं र तराईमा दुई गुणाले बढ्यो काठमाण्डौं - मुलुकमा महंगी अचाक्ली बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा समग्र मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशत नजिक पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वजनिक गरेको वित्तीय अवस्था प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिका समग्र उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । शुक्रबार, जेठ २७, २०७९
काठमाण्डौंको जग्गा कित्ताकाटमा कडाई, चारआना भन्दा माथिमात्रै कित्ताकाट गर्न पाईने काठमाडौं - के काठमाण्डौं उपत्यकामा जग्गा कित्ताकाट गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्छ भने जग्गा कित्ताकाटबारे सरकारले ल्याएको नयाँ नियम पालना गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा कडाई गर्दै भू–उपयोग नियमावली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । मंगलबार, जेठ २४, २०७९
कबड्डी ४ को गीत केसरीले लोकप्रियता कमाउँदै काठमाण्डौं - चर्चित फिल्म ‘कबड्डी ४, द फाइनल म्याच’को शीर्ष गीत ‘केशरी’ ले बजार तताएको छ । एसडी योगीको संगीत र स्वरमा रहेको गीतमा फिल्मका दुई मुख्य पात्र सौगात मल्ल र मिरुना मगर फिचर्ड छन् । गीतमा रामअविरल विष्टको शब्द र रिकेश गुरुङको एरेन्ज छ । मंगलबार, जेठ २४, २०७९
विवाहेत्तर सम्बन्धबाट यसरी छुट्कारा पाउन सकिन्छ ! विवाहलाई पवित्र नाता मानिन्छ । विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि एकअर्काले सुखदुःखमा मात्रै नभई जिन्दगीभर साथ दिने वाचा-कसम खाएका हुन्छन् । यसरी गरिएको वाचा र जोडिएको विश्वास कायम राख्न दुवैले उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । विवाह सम्बन्धमा बाँधिइसकेकाहरुले विवाहेत्तर सम्बन्ध राख्नु राम्रो मानिंदैन । विवाहेत्तर सम्बन्धका कारण दम्पतीबीच दरार पैदा गर्छ । मंगलबार, जेठ २४, २०७९
सरकारको अपरिपक्वता : आईतवार बिदा दिने निर्णय खारेज काठमाडौँ - सरकार हप्तामा दुई दिने सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयबाट पछि हटेको छ । सरकारले केही साता अघि आइतबारपनि बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । सोमबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबारको बिदा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । सोमबार, जेठ २३, २०७९
एकिकृत समाजवादीका नेता खनाल भन्छन् : ‘वाम एकता आवश्यक छ’ २० जेठ, काठमाण्डौं - नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले वाम एकता आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै त्यो मुलुकको आवश्यकता भएको बताएका छन् । मुलुकका लागि वाम एकता आवश्यक रहेपनि वामपन्थी आन्दोलनका मूल नेताहरु नै त्यसको पक्षमा नरहेको उनले टिप्पणी गरे । शुक्रबार, जेठ २०, २०७९
घट्यो ईन्धनको मुल्य, खाना पकाउने ग्यासको घटेन १९ जेठ, काठमाडौं - नेपाल आयल निगमले डिजेल, पेट्रोल र मटितेलको नयाँ मुल्य तय गरेको छ । निगम सञ्चालक समितिको बैठकले डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलको मूल्य लिटरमा १०(१० रुपैयाँका दरले घटाउने निर्णय गरेकोहो । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले नयाँ मुल्य अनुसार अब पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७० रूपैयाँ र डिजेल तथा मटितेलको मूल्य १५३ रूपैयाँ पर्ने जानकारी दिए । बिहीबार, जेठ १९, २०७९
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड (पूर्णपाठ) काठमाण्डौं - सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरो हुन् । आइतबार, जेठ १५, २०७९
यी हुन् सम्पर्कविहिन तारा एयरको जहाजमा सवार चालक दलका सदस्य तथा यात्रुहरु (नामावली) काठमाण्डौ - पोखराबाट जोमसोम उडेको सम्पर्कविहीन तारा एयरको ९ एनएईटी ट्विनअटरको खोजी भइरहेको छ । जहाजमा १९ जना यात्रु र तीन जना चालक दलका सदस्य सवार थिए । तारा एअरका प्रवक्ता सुदर्शन गड्तौलाले जहाजमा तीमध्ये १६ नेपाली र ६ जना विदेशी नागरिक रहेको जानकारी दिए । हराइरहेको विमानको हेलिकप्टरमार्फत खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । आइतबार, जेठ १५, २०७९
आचारसंहिता बिपरित प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु चुनावी दौडाहमा काठमाण्डौं - प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत चुनावी प्रचारप्रसारमा हिँडेका छन् । गठबन्धनका उम्मेदवारको पक्षमा मत माग्न उनी जिल्ला दौडाहामा निस्केका हुन् । शनिबार रूपन्देहीको बुटवल र तनहुँ पुग्न देउवाले नेपाली सेनाको एनए ०५८ हेलिकोप्टर प्रयोग गरेका छन् । आइतबार, वैशाख २५, २०७९
मतदाताको अन्तिम नामावली सार्वजानिक, संख्या १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ काठमाडौँ -आगामी निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ जना मतदाताले सहभागिता जनाउन पाउने भएका छन् । आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गरेको थियो । आइतबार, चैत १३, २०७८
बैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आयोग तयार बनेपा - निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचत गर्न तयार रहेको जनाएको छ । आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले २०७९ साल वैशाख २० गतेभित्र ७५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारीमा आयोग रहेको जानकारी दिएका हुन् । बुधबार, पुस ७, २०७८